Goorma ayaa Masaajidda la furi doonaa? Goorma ayaa Cibaadada laga bilaabayaa Masaajidda iyo Masjidka? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraGoorma ayaa Masaajidda la furi doonaa? Goorma ayaa Cibaadada laga bilaabayaa Masaajidda iyo Masjidka?
23 / 05 / 2020 06 Ankara, Gobolka Central Anatolia, GUUD, Headline, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
Goorma ayaa Masaajidda la furi doonaa? Goorma ayaa cibaadada laga bilaabayaa masaajidda iyo masaajidda?
Wareegtada ay Wasaaradda Arimaha Gudaha u dirtay 81 Goballada Gobollada, nooc cusub oo coronavirus ah (Covid 19) gudaha baaxadda tallaabooyinka uu qaaday Agaasinka Arimaha Diinta si looga hortago faafitaanka Turkiga; Laga soo bilaabo 16-kii Maarj 2020, waxaa la xasuusiyay in illaa faafidda cudurka la xakameynayo, dhammaan masaajidada iyo masjidka ku yaal dalka oo dhan ay joojiyeen kiniisaddii.
Marxaladda hadda jirta, waxaa lagu caddeeyay in tillaabooyinka la qaadayo furitaanka masaajidda iyo masjidka lagu caabudi doono kulanka Golaha Wasiirrada, kaasoo lagu qabtay xarunta madaxweye Recep Tayyip Erdogan Isniintii, waxaa la go’aamiyay in qadada, galabta iyo salaadda jimcaha lagu sameyn karo jameecada masaajidda dhexdeeda iyadoo la raacayo qaab dhismeedka xeerarka la go’aamin doono Jimcaha, 29ka May 2020. ayaa la muujiyey.
Nadaafadda, fogaanta bulshada iwm ee ay tahay in loo hoggaansamo aagagga ay si wadajir ah u go'aamin doonaan guddiga Sayniska. tixgelinta xeerarka Laga bilaabo Jimcaha, Meey 29, 2020 Xeerarka ay go’aamiyeen wasaaradaha ay khuseyso iyo Agaasinka arrimaha diinta ayaa ku taxan wareegtada sida soo socota:
1) Kaliya masaajidda iyo masjidka la leh bulshada duhurkii, galabtii iyo jimcaha Salaadihiisa ayaa la fulin doonaa. Waqtiyada kale, masaajidda iyo masjidka waa la furi doonaa kuwa doonaya inay fuliyaan salaadda shaqsiyadeed.
2) Waxa daboolay bandoowga Digniino / macluumaad lama huraan ah ayaa la siin doonaa muwaadiniinta iyo dadka leh astaamaha jirrooyinka si ay u joogaan guriga.
3) Masaajidka / barxadda masjidka / barxadda hore waa aagagga furan. Marka loo eego xaaladaha saadaasha hawada / xilli xilliyeedka, duhurkii iyo duhurkii ayaa lagu tukan karaa masaajidka. Salaada jimcaha masaajidka laguma sameyn doono.
4) Feejignaan dheeri ah ayaa la siin doonaa nadiifinta dhamaan qaybaha masaajida iyo masaajida, kuwaas oo bilaabay in lagu caabudo golaha, iyadoo la adeegsanayo habab ku habboon maalin kasta. Hawlaha nadiifinta, meelaha taabashada gacmaha ay aad u badan tahay, sida gacanta albaabka, ayaa lagu tirtirayaa gaar ahaan agabyada jeermiska dila.
5) Waxay ku yaalliin masaajidka iyo masjidka qaboojinta hawo-mareenka iyo hawo-ma-shaqeyntooda, in albaabada iyo daaqadaha la furo hawo joogto ah oo masaajidka iyo masaajidka ayaa la bixin doonaa.
6) In la ilaaliyo meelaha la wadaago ugu yaraan qolalka maylka, isha biyaha iyo musqulaha waa la xiri doonaa. Abyil iwm. inaad la kulanto masaajidda iyo masjidka adoo kaafinaya baahiyaha ka jira guriga ama goobaha shaqada Macluumaadka / digniinta lagama maarmaanka ah waxaa la siin doonaa ururka.
7) Qof kasta, oo qaban doona jameecada, duhurkii, galabtii iyo salaadda Jimcaha, wuxuu xiran doonaa maaskaro caafimaad. Qofka / dadka aan maski lahayn ma loo oggolaan doono inuu ku tukado kiniisadda.(Kuwa ku tukan doona shaqsiyaadka salaada masaajida iyo masjidka waxay kaloo xirtaan maaskaro.)
8) Waxaa badanaa lagu isticmaalaa masaajidda iyo masjidka waxaana la qiimeeyaa si loo kordhiyo halista faafa / fiditaanka. rosary, ilmo galeenka, shumaca kabaha iwm. wax lama ogolaanayo.
9) Waraaqaha digniinta ee ay ku jiraan tillaabooyinka la qaadayo ee ku saabsan coronavirus iyo xeerarka la raaco si loogula tukado kiniisadda masaajidda iyo masaajidada (adoo ka helaya agaasimayaasha caafimaadka ee gobolka iyo degmada, mufti), si dhakhso ah ayaa loo cadaadin doonaa oo lagu djin doonaa masaajidada iyo masjidka oo dhan.
10) Dadka imanaya masaajidda iyo masjidka waxaa la siin doonaa si ay ula yimaadaan tukashadooda shaqsiyadeed. veya waxaa bixin doona xafiisyada mufti iyagoo bixinaya sariir tuug oo la isticmaali karo. Markii salaadda lagu tukado barxadda masjidka, muwaadiniinteena waxaa lagula talinayaa inay maydhaan salaadahooda.
11) Dhammaan aagagga lagu duceeyo, waxay halis ugu jirtaa isu-gudbinta cudurka oo aan lagu daweyn karin. baakad, baakado, joodariga iyo gogosha iwm. sariirta lama isticmaali doono.
12) Qof kasta oo galaya masaajidda iyo irridda masjidka iyo meelaha loo cayimay inay yihiin masaajidda / meelaha cibaadada waxaa la siin doonaa si jeermi gacmahu u jabaan.
13) Si loo ilaaliyo wakhtiga wadajirka ah ee masaajidda iyo masjidka sida ugu macquulsan, Waxaa la hubin doonaa in bulshada lagu wargaliyo in sunnada sunnada salaadda lagu sameyn karo guriga dhexdiisa iyo ducada lagu sameyn karo guriga..
14) Digniinta lagama maarmaanka ah waa loo soo celin doonaa bulshada si looga fogaado taabashada jirka (is gacanqaadka, faa iidada, isku duubista iwm.) Iyo in la raaco sharciga masaafada bulshada.
15) Waxay ku taal xerada masaajidka astaamaha meerayaasha lama furi doono booqdayaashasi looga hor tago in la taabto bannaanka hore ee meelihii hore ee meelihiisu Xariga waxaa lagu jiidi doonaa masaafo ugu yaraan hal mitir.
16) Waxay adkayn doontaa in la ilaaliyo masaafada bulshada ee masaajidda mevlit, mass mass iwm. Cunto karinta looma ogolaan doono munaasabadaha iyo masaajidada..
17) Tallaabooyinka laga qaadayo kuwa dawarsanaya ee ku hor yaal masjidka hortiisa waa laqaban doonaa iyo gaar ahaan bandhiga la yiraahdo salaada jimcaha ka dib. khudaarta, miraha, dharka, waxyaabaha caruurtu ku ciyaarto, iwm. iibka alaabada looma ogolaanayo.
18) Si loo sameeyo salaadda jameecada iyadoo la raacayo qaanuunka masaafada bulshada ee masaajidda iyo masjidka, oo ay hoos imaaneyso isuduwidda Guddoomiyaha / Golayaasha Gobollada;
a) Iyadoo la tixgelinayo in qofku u isticmaali doono aag ugu yaraan 60 × 110 cm (aagga ay ku daboolan tahay laamiga salaadda) aagagga xiran / barxadda / jardiinada masaajidda iyo meelaha kale ee lagu tukado si loo hubiyo masaafada bulsheed ee udhaxaysa kuwa salaadda sameeya, Calaamadeynta waxaa lagu sameyn doonaa dhulka iyadoo loo eegayo qaabka loo soo diray lifaaqa, masaafo hal mitir u jirta jiho kasta oo ka soo baxda aagagga ba'an ee lagu tukado..
b) Awoodda ugu badan ee masaajidda, jardiinada / barxadda iyo meelaha bannaan ee lagu tukado waxaa lagu laalaaday albaabka aagagga la soo xusay si qof walba u arki karo. Marka tirada dadka gudaha ku jirta ay gaarto meel ku filan, tan waxaa lagu dhawaaqi doonaa iyadoo la raacayo jameecada sugeysa soo galitaanka.
19) Jimce tukada,
a) In ay go'aan ka gaadhaan Golayaasha Gobollada iyo Degmooyinka (inta ay le'eg yihiin go'aammada muwaaddinka gobol / degmo) waxaa laga dhisi karaa masaajidda leh jardiinooyin ku filan / barxado / dhul furan.
b) Degsiimooyinka meesha masjidka / barxadda masjidka ku yaal kuma filna iyadoo la soo jeedinayo mufti degmo / degmo gudoomiyeyaasha degmooyinka ee degmooyinka, iyo aagagga furan ee loo arko inay ku habboon yihiin oggolaashaha guddoomiyaasha, salaadda Jimcaha waxaa lagu sameyn karaa qaab-dhismeedka la qaadayo..
c) Go’aaminta aagagga la sameeyo salaadda Jimcaha arrimaha sida xaaladaha xilliyeed iyo ballaca aagga iyo fududaanta gelitaanka iyo bixitaanka waa la tixgelin doonaa.
d) Masaajidada (barxadaha / jardiinooyinka) waxaa go’aaminaya Maamulka Gobollada iyo Degmooyinka degmada si ay u gutaan salaadda jimcaha iyo meelaha furan 26.05.2020 waxaa lagu shaacin doonaa dadweynaha iyadoo la adeegsanaayo xarumo kala duwan oo isgaarsiineed illaa.
e) Meelaha xiran ee masaajidda ayaa la hayn doonaa Jimcaha.
f) Taxaddarro lama huraan ah ayaa la qaadi doonaa si loo maqlo codka sida ugu habboon ee aagga looga sameeyo salaadda Jimcaha oo ay u muuqato jameeca inta khudbada la akhrinayo.
g) Meelaha bannaan ee la go'aamiyay in lagu sameeyo salaadda jimcaha waa la nadiifin doonaa / la nadiifin doonaa salaadda ka hor iyo ka dib salaadda iyadoo lala kaashanayo degmooyinka.
h) Inta lagu jiro salaadda jimcaha, wuxuu bilaaban doonaa fadhiista darajada koowaad waxaana amarkan la raaci doonaa ilaa darajada ugu dambeysa la buuxiyo. Dhamaadka salaadda oo ka bilaabmaysa darajada ugu dambaysay, siday u kala horreeyaan. Tallaabooyin lama-huraan ayaa la qaadi doonaa si looga tago bulshada inay ka baxaan aagga salaadda.. Si loo hubiyo amarkan, ugu yaraan shan qof waxay ka kooban yihiin masaajiddo iyo goobo u furan salaad kasta iyadoo la raacayo soojeedinta muftiga gobollada / degmo ee ay soo jeediyaan guddoomiyaha / guddoomiyeyaasha degmo. Ergada Jimcaha waa la abuuri doonaa oo shaqaalaha sharci fulinta ayaa la qori doonaa.
i) Ergada jimcaha ayaa ugu horeyn ka koobnaan doonta saraakiisha diinta, macallimiinta koorsada Quraanka Kariimka ah iyo shaqaale mufti ka ah masaajidyada aan tukan salaadaha jimcaha. Macnaha guud, haddii aysan jirin shaqaale ku filan, waxaa suuragal ah in laga meeleeyo mas'uuliyiinta kale ee dawladda. Sidoo kale, haddii loo baahdo, xubnaha ururada masaajidda waxaa loo xilsaari karaa ujeedadan.
Waajibaadka Ergada Jimcaha,
j) Ergada Jimcaha; Isku dubbaridka shaqaalaha sharci fulinta ee loo xilsaaray, goluhu wuxuu galayaa aagagga lagu tukado gudaha shuruudaha ku xusan wareegtadan (gacmaha nadiifiyo, gala maska, soo gal tukashada salaadda, iwm.), Isagoo sharraxaya xaaladdan iyada oo la raacayo jameecada sugaysa gelitaanka marka tirada dadka soo gelaya ay gaari doonto tirada la cayimay. iyo salaadda ka dib, wuxuu u adeegi doonaa inuu hubiyo in bulshada ay u baxdo iyadoo la ilaalinayo masaafada bulshada.
k) Waxay si toos ah mas'uul uga tahay hirgelinta xeerarka ku xusan wareegtadan ee ay soo saareen Guddiyada Degmooyinka iyo Degmooyinka, gaar ahaan in shirka lagu qaado qaab siin doona masaafada bulsheed ee meelaha lagu tukado, marka beeshu aysan galin aagagga lagu tukado, oo aysan ahayn in dadka laga buuxiyo xadgudub ku ah masaafada bulshada. shaqaalaha xoojinta sharciga ayaa la qori doonaa. Qeybaha xoojinta sharciga ayaa fulin doona waajibaadkooda iyagoo isku dubarida Ergada Jimcaha.
l) Meelaha laga tukado salaadaha jimcaha waxaa fulin doona qaybaha fulinta sharciga, carqaladaha jireed sida caarada sahanka, xarkaha, xargaha midabka / xargaha, balaastigga caagga ah iwm waxaa loo isticmaali doonaa in lagu hubiyo gelitaanka / bixitaanka bulshada qaab nidaamsan.
m) Salaadda Jimcaha lama soo bandhigi doono, wacdiyada ay soo diraan Madaxtooyada ee Arrimaha Diinta ayaa la aqrin doonaa iyada oo aan wax dheeri ah iyo diidmo ah la sameynin, waxaana dadaallo la sameyn doonaa si loo sameeyo salaadda sida ugu dhakhsaha badan.
Macnaha guud; Qorsheynta iyo meeleynta waxaa sameyn doona Maamulka Gobollada / Degmooyinka Degmooyinka, iyadoo lala kaashanayo maamulada degmooyinka iyo hay'adaha la xiriira, si loo fuliyo fulinta gebi ahaanba. Ogeysiisyo lama huraan ah ayaa loo sheegi doonaa muwaadiniinteena wax dhibaato ahna lagamala kulmi doono dhaqan ahaan.
50 Qiimaha Kordhinta Masjidka iyo Kabaha Baabuurta
Masjidka iyo baabuurta fiilada ayaa imaanaya İzmir.
Booqashada TÜVASAŞ ee Kutubta iyo Qur'aanka Kariimka
Sadarka taraamku wuxuu joojiyay beerta masaajidka dhismaha isha
Masaajid iyo Kabo Xawaare ku yimaada İzmir!
Bursaray 'cabo masaajidka mashiinka mashiinka ayaa soo baxay
Masaajidka la qabtay si loogu xnumx.kez Airport ee Turkey
Mashruuca Masjidka Çamlıca
3. goorma ayuu mashruuca maddaarka bilaabi doonaa?
Mashruuca Tareenka Erzincan-Trabzon wuxuu bilaabi doonaa goorta
Markaad bilowdo tareenka xaafadda Samsun